Ibhotile kaJack, uTrolley Jack, uJack weGarage, uJack Yimani-Jiaye
Ifowuni: + 86-573-86855888
IPorta yamandla uJack
Ukuma kweNjini kunye neNkxaso
Umoya weHydraulic Bottle Jack
I-ATV kunye nezixhobo zokulungisa izithuthuthu
I-Wheel Dolly kunye nendawo yokuma kweJack
I-Haiyan Jiaye Machinery Equipment Co, Ltd isekwe ngo-2003. Sisebenza ngokubonakalayo ekuveliseni nasekuthengiseni izixhobo ezahlukeneyo zokuphakamisa: iijydraulic jacks, izixhobo zokulungisa iimoto, izixhobo zokulungisa izithuthuthu kunye nezinye izixhobo zemoto. Siphumelele i-ISO9001 yokuQinisekiswa kweMigangatho kwaye uninzi lweemveliso zethu zinesitifiketi seEC. Iimveliso zethu zithunyelwa kwamanye amazwe kwihlabathi liphela. Ngeminyaka yophuhliso, ngoku siba luphando, ukuphononongwa, ukuvelisa kunye nokuthengisa kurhwebo langaphandle kunye.
Inkolelo yenkampani yethu "ngumgangatho wokuqala, ukuveliswa kobugcisa, inkonzo elungileyo, kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza". Injongo yethu kukwenza udidi oluphezulu, imveliso ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu phakathi kwaba kukhuphisana nathi.
Imigangatho yeBhotile eyiJack BJ0201
UTolley Jack FL0205
Igalari Jack FL0303
Ukuma kukaJack JS0210
Amagama anokukuxela kuphela. Jonga le galari yeefoto ukuze ubone iihaas zakho kumacala onke.
Ukusuka kulawulo olusebenzayo kumzi-mveliso olusebenzayo, ukuya kwiNkqubo yethu yokuKhangela i-Wireless Intuitive (WIP), ekukhetheni kwethu izijikelezi kunye notshintsho lwezixhobo, sikuvumela ukuba usebenze ngomatshini wakho ukuze usebenze kuwe. Emva kwayo yonke loo nto, uyazi into oyifunayo ngcono kunaye nabani na. Funda ngakumbi ngayo yonke into esinayo.
Yakha umatshini wakho wokuBumba
Ukulungele ukuyila indlela entsha yeAaas ethe nkqo? Masifumane umatshini ofanelekileyo kwivenkile yakho, kwaye ubenzele owakho ngokwongeza ukhetho kunye neempawu ezisebenzayo kuwe. FUNA OKU
fracturing Garage Jack 3ton , 3ton fracturing Garage Jack , Car Creeper , Izixhobo zeeMoto, fracturing Garage Jack , Repair Tools ,
Adress: No.699 Yintan Road, Haiyanan Development Zone Zingji, Jiaxing, Zhejiang Province
Umsitho wamva nje
Uluhlu lwesicelo seHydraulic jack
Uluhlu lwesicelo seHydraulic jack Hydraul ...
Lo mgangatho awufumaneki kwinqwelo ...
Ngoku abanini bezithuthi ngokuqinisekileyo abayi ...